अध्ययन अनुसार साथी संगतका कारण मान्छे निरोगी हुन सक्छन्, तपाईका कस्ता छन् ? – News Online
सन्जिप तिम्सिना – साथी अर्थात मित्रताको सम्बन्धमा हाम्रो समाज निकै उदार छ । समाजले यस्तै मित्रतालाई बलियो बनाउन मितेरी प्रथाको विकास गरेका थिए । साथी वा मित्रताबारे विभिन्न कथाहरु रचना गरिए ।
कृष्णजी र सुदमाको आदर्श कथाले पनि मित्रताको महत्व दर्शाउँछ । अथवा तपाईंको साथी सर्कलमा यस्ता साथीहरु को को छन् ?
साथी त धेरै होलन् । कार्यलयका साथी होलान् । विद्यालयका साथी होलान् । टोलका साथी होलान् । व्यवसायका साथी होलान् । यी साथीहरुसँग हामी कुनै न कुनै स्वार्थले जोडिएका हौ । किनभने निस्वार्थ जोडिएका साथीहरु हामीसँग एकाध मात्र होलान् । भनिन्छ, तपाईंसँग जति धेरै साथीहरु छन्, उत्तिनै जीवन सहज हुन्छ ।
साथीको अर्थ र महत्व : भनिन्छ, आवश्यक परेको बेला काम लाग्ने साथी नै असल साथी हो । नहोस् पनि किन ? आखिर त्यो साथी नै त हो, जोसित हामी सुखदुखका कुरा गर्छौ ।
साथीको संगत र हाम्रो स्वास्थ्य : साथीभाईका सम्बन्धमा हालै अमेरिकामा गरिएको एक शोध अनुसार पारिवारिक वातावरण, असल घरछिमेक तथा साथीभाईबीच रहने व्यक्तिहरुमा स्वस्थ रहने सम्भावना ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको पाइएको थियो ।
सामाजिक पृष्टभूमी भएकाहरुको लामो आयु: यो शोधमा सात वर्षको अवधीमा विभिन्न महादीपका विभिन्न पृष्ठभुमि तथा उमेरका करिब तीन लाख मानिसमाथि अध्ययन गरिएको थियो । यसमा सामाजिक पृष्ठभूमि राम्रो हुने व्यक्ति स्वास्थ्य एवं आयु लामो भएको पाइएको थियो । यस्ता रहेका छन् ।
Published September 1, 2021 By टक नेपाल संवाददाता
नेपाली सेनाद्वारा विभिन्न स्थानमा खोज तथा उद्धार कार्य सञ्चालन
नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत् मोडल तथा कलाकार निशा घिमिरेको मृ’त्यु